Kukura kwemifananidzo yakajeka ingori kutanga.
Kana iwe uri kufa kuti uzive kuti irinani irinani Facebook's nyowani VR sisitimu iri kupfuura yekutanga, iwe uri mune mhanza, nekuti yedu Oculus Kutsvaga 2 Graphics enzaniso yakagadzirirwa kuita izvo chaizvo. Kutenda nekuedza kwevamwe vanogadzira zvinoshamisa, mitambo yakati wandei yakatogamuchira zvigamba zvekutanga zvinowedzera magirafu evaridzi veOculus Quest 2, ichiita Oculus Kutsvaga 1 mitambo kunyanyisa kunyudza. Heck, ungatoda imwe nzvimbo yekuchengetera kana mitambo yakaita Kufamba Vakafa: Vasande & Vatadzi pane chero chiratidzo.
Asi kukwidziridzwa kwekuita kunouya ne3-chizvarwa kusvetuka mumachipisi hakusi mifananidzo iri nani - zvinorevawo kuvandudza mashandiro pabhodhi. Zvinoreva zvirinani AI, vavengi vazhinji pachiratidziro panguva imwe, nyika dzakadzama uye mavara, kukurumidza kurodha nguva, kusvetuka kukuru mukugadzirisa uye kujekesa kuzere uye, pamwe chandinodisisa, kuenderana neWi-Fi 6 kusvika pakupedzisira kugadzira 90Hz isina waya PC VR yemitambo zvinogoneka.
Oculus Kutsvaga 2 vs. Oculus Kutsvaga mifananidzo yekuenzanisa Yekutanga mitambo yakasimbiswa
Ipo iyo Oculus Kutsvaga isingavhure kusvika Gumiguru 13, vagadziri vatotanga kukwidziridza mitambo yavo kuti vatore mukana weiyo Snapdragon XR2 chipset mukati meOculus Kutsvaga 2. Mitambo senge Iyo Kufamba Vakafa: Vasande & Vatadzi, Reel Fishing, Gravity Lab, Waltz weWizard, uye Red Matter (kutumidza zita mashoma) vatove vakagamuchira zvigamba zvinowedzera zvimwe zvemhando dzemhando dzemhando, bump resolution yekugadzirwa, inowedzera mumagetsi mitsva mhedzisiro, uye kunyange zvakanyanya kuwedzera resolution yese yekujekesa zvirinani (uye chaiwo ari nyore kuverenga kuverenga).
Ngatitarisei mashoma, handiti? Izvo zvakakosha kuti urangarire kuti iyi mitambo yakavakirwa iro rakanyanya kudzikira simba Oculus Kutsvaga, uye mitambo yemunguva yemberi yakavakirwa kubva pasi-kumusoro kweiyo Oculus Kutsvaga 2 ingangoita kunge inotaridzika zvirinani. Zvakare, ita shuwa kuona iyo mifananidzo pazasi mune yakazara-skrini kuti uone misiyano yese. Muzhinji, yakatorwa mifananidzo yeVR hainyatso kukupa iyo izere mhedzisiro yauchazoona ine headset pachiso chako, saka ziva kuti mitambo iyi ichataridzika zvirinani kana uchishandisa iyo Oculus Kutsvaga 2 maringe nezvauchazoona pano.
Sci-fi nzvimbo inoshamisira Red Matter yaive yatove imwe yekutarisisa, kana zvisiri ari yakanyanya kutaridzika Oculus Kutsvaga mutambo pamusika. Hazvishamise ipapo kuona uyu mugadziri achisimudzira zvakanyanya kugadzirisa kwemutambo pamwe nemavara, achikweretesa zvakatowanda kumutambo. Sezvauchaona kubva kumusoro kwepfuti, iyo yekutanga Oculus Quest yaivimba zvakanyanya yakatarwa foveated rendering (FFR) kuvimbisa kuita kwakanaka.
Nepo FFR iri yakanaka yekuchengetedza kuita kwakadzikama, inoshatisa zvakanyanya hunhu hwemufananidzo mune yako yekuona maonero uye dzimwe nguva inogona kutemerwa pakati pekoni koni yekuona. Iwe uchaona uyu musiyano mune maviri ekutanga screenshots, ayo anoratidza akakosha pixelation pane chero chinhu chiri kunze kwenzvimbo koni koni yekuona pane yekutanga Oculus Kutsvaga.
Iyo Oculus Kutsvaga 2 vhezheni inoita kunge inobvisa FFR zvachose, ichiita kuti mufananidzo wese uratidzike kuva wakachena uye wakachena. Pamusoro peizvozvo, pane kumwe kuwedzera kuri pachena mukugadzirwa kwemhando yepamusoro kwakatenderedza nzvimbo, kunyanya mumakomo nemumakomo emawere, pamwe nezvimwe zvinhu zvakaita sekunze kwechikepe chaunokwikwidza.
Gravity Lab iri Rube Goldberg-esque puzzler iyo inoona vatambi vachigadzira michina yekuendesa mhando dzakasiyana dzemamabule kumidziyo. Sezvo iri muchadenga, iwe unowana yakawanda yegiravhiti-yakavakirwa mapuzzle mune ayo matatu-matanho ematanho, kusanganisira akasiyana maseru akaomarara ayo anonetsa vatambi kushandisa zvidimbu zvidiki kuti basa riitwe.
Kubva pane zvandinogona kutaura ndavatamba vese vari vaviri padivi-ne-padivi, iyo Oculus Kutsvaga 2 vhezheni yeGravity Lab inotaridzika yakafanana neiyo PC VR vhezheni. Izvi zvinosanganisira kuvandudzwa kwemwenje, macube-akavezwa maratidziro pamachubhu uye nezvimwe zvinowoneka nzvimbo, girazi shader, simba rekuvhenekesa, uye mimwe mhedzisiro. Iko hakuna mutsauko muhunhu hwemhando kubva pane zvandingaudze - izvi zvese zvine chekuita uye resolution bump mumutambo uyu.
Muchokwadi, kana iwe ukatarisa vhidhiyo yakatenderedza iyo 16-yechipiri mamaki (kana iyo yechipiri pikicha pazasi), iwe uchaona kuti ine simba mwenje inopenya uye inoratidza kune akati wandei maspace pane iyo Quest 2 vhezheni, ichivhenekesa maoko ako, kuratidza mukati girazi, uye kazhinji ichitaridzika sezvazviri. Unogona kuona mwenje wakasvibira uye mutsvuku unopenya munzvimbo dzese, uye zvinonyatsotaridzika kunge zvinonakidza. Iyo Quest 1 vhezheni, kune rumwe rutivi, inoratidzira mwenje wakadzikama pasina kuratidzira kana chero chinhu cherudzi uye inouya ichibva yatarisa zvishoma chena.
Kufamba Vakafa: Vasande & Vatadzi
Kufamba Vakafa: Vasande & Vatadzi yanga iri imwe yeinotarisirwa Oculus Kutsvaga kuburitswa kubvira payakatanga paPC kutanga kwegore rino. Kana ichienzaniswa nePC vhezheni, iyo Oculus Kutsvaga vhezheni dzinoonekwa dzakanaka kwazvo asi ruzivo rwacho, nerutendo, rwakafanana chaizvo. Icho chokwadi chekuti Skybound Varaidzo chakatokwanisa kuwana iyi fizikisi-inorema chiito RPG paKutsvaga munzvimbo yekutanga inoshamisa zvinoshamisa.
Iyo demo pane yeOculus Quest chitoro inotanga iwe ingangoita awa mumutambo uye ichikuisa iwe pakati peguta remuguta reNew Orleans ine chinangwa chekutora ringi yemuchato kubva kumurume wemukadzi zombified. Pakutarisa kwekutanga, zvinoita kunge paine misiyano mishoma pakati peiyo Oculus Kutsvaga uye Oculus Kutsvaga 2 shanduro dzemutambo, asi kukurumidza kufamba uchitenderera nzvimbo kunoratidzira huwandu hwakawanda uye misiyano yemwenje kuti uone.
Iyo migwagwa yakasviba yemashure-apocalyptic New Orleans inoratidzira mamwe marara uye kumwe kutaridzika kwechokwadi zvinhu yakatenderera paQuest 2 vhezheni. Kune zvimwe zvinhu zvakawandisa pasirese, sezvaunocherekedza kubva pamufananidzo wekutanga pazasi, apo nhare yese yefoni uye palettes (kuruboshwe) nemuti (pakati) zvisipo zvachose paKushandura 1 vhezheni. Zvimwechetezvo, wechipiri mufananidzo unoratidza dutu remoto richiita mapeti akaripoteredza kupenya paKutsvaga 2, nepo mufananidzo wechitatu uchiratidza zvigadziriso zvemwenje senge mwari unouya nepaguruva windows mupfuti yechitatu paKutsvaga 2.
Waltz weWizard inyanzvi wizard simulator inoona vatambi mukati memba yewizard, ichibatanidza zvigadzirwa kugadzira potions, kuita zvitsinga, uye kushanyira nzvimbo kuti uite muhondo uye mamwe mapuzzle. Waltz weWizard yaive imwe yemitambo yekutanga ku gonesa kuteedzera kwemaoko paOculus Kutsvaga, uye ikozvino ndiwo mumwe wemitambo yekutanga kukwidziridzwa yeKutsvaga 2.
Iyo Quest 2 inowedzera yeWaltz yeWizard inosanganisira 150% resolution yekuwedzera, zvimwe zvinhu uye neruzivo rwakanaka mukamuri huru, kuvhenekera maruva (ona makenduru nemarambi), realtime kuvhenekera kubva kune zvitsinga nezvimwe zvinhu, anisotropic textures, uye yakavandudzwa chidimbu. mhedzisiro kumativi ese. Mumufananidzo wekutanga pamusoro, iwe uchaona iyo mifananidzo kumadziro ekumashure ari yekudyidzana inopinza paKutsvaga 2. Mhedzisiro iyi yakanyanya kutsamwiswa kana uchishandisa mahedhifoni uye kuratidza izvo anisotropic kusefa kunogona kuita kure kurekura uye chinhu chinhu.
Oculus Kutsvaga 2 vs. Oculus Kutsvaga mifananidzo yekuenzanisa Kutarisa kune ramangwana
Padivi rehunyanzvi rezvinhu, Oculus akatovandudza maratidziro ekuita kwevagadziri mumagwaro avo epamutemo. Vamwe vanogadzira paRuddit ndakakwanisa kukwenya manhamba, uye musiyano uripo pakati peOculus Kutsvaga uye Oculus Kutsvaga 2 kwakanaka kunoshamisa. Zvinangwa zveFacebook zvinoratidza kuti iyo Oculus Kutsvaga 2 inogona kupa ingangoita gumix nhamba yevatatu kana ichienzaniswa neOculus Kutsvaga 10.
Zvichienderana, ndirwo rudzi rwekusvetuka kwetsika kwataitarisira kana tichirota chinotevera-chizvarwa chakamira cheVR system, uye zvinoita sekunge Qualcomm neFacebook vakakwanisa kuiburitsa. Nepo kuverenga kwepolonioni kwave kuita isingakoshe metric yemitambo inonyaradza muzvizvarwa zvichangopfuura, iyo yekutanga Oculus Quest yaigona kungopa pakati pemakumi mashanu nemakumi mashanu emakona matatu pafuremu. Oculus Kutsvaga 50,000 inokwanisa kutenderedza chiuru chimwe chetatu patatu pasekondi, uye izvo hazvitomboverengera mune nyowani shader kugona uye zvimwe zvehunyanzvi ruzivo isu isu hatizopenete muno.
Iyo chati iri pamusoro kubva kuQualcomm inoratidza kusiyana kwekuita pakati peiyo Snapdragon XR2 muOculus Kutsvaga 2 uye iyo Snapdragon 835 mune yekutanga Oculus Kutsvaga. Musiyano wekuita musiyano uyu unoshamisa, kunyanya kana iwe ukatarisa iyo AI metric. Kuvandudzwa kwe11x hakusi kuseka, uye zvinoita sekunge kunopindirana-ne-ruoko pamwe ne10x kuvandudzwa mune polygon kuverenga yatakataura pamusoro.
Sei, chaizvo, AI kuita kunoshandura kuita mitambo? Anovandudza weSun Shard akashandisa iyo gladiator-dhizaini nhandare izere neiyo zombified skeleton vavengi kubatsira kuratidza musiyano munzira inobatika. Vhidhiyo iri pazasi inoratidza kuti mutambo wepakutanga Oculus Kutsvaga unongokwanisa chete kubudirira kuratidza uye kubata AI uye fizikisi kuverenga kwevavengi vaviri panguva, zvichiita kuti nhandare inzwe tad shoma. Iyo Oculus Kutsvaga 2 inokwanisa kubata vavengi vasere pasina dambudziko, uye icho chingori chinhu chakavakwa muzuva rimwe chete mushure mekunge mugadziri agamuchira kwake Kutsvaga 2.
Iyi haisi bvunzo yakaitwa nesainzi, asi izvi zvinoratidza mutsauko muCPU pakati pemahedhifoni maviri (?) kuenzanisa huwandu hwe "nyama yakavakirwa" vavengi pamberi pemhando yekufananidza yatanga kuderera. #VR pic.twitter.com/sry1SGmLYG
- RJ (@RJdoesVR) October 1, 2020
Isu takaona kubva padivi rePC zvinhu izvo AI kuverenga zvinorevesa kupfuura kungwara vavengi (kana kupfuura vavengi) - zvinorevawo nzira dzekuwedzera zvakanyanya ese maviri mhando yemhando uye mashandiro kuburikidza nematekinoroji senge DLSS 2.0. Facebook ndiyo yaive kambani yekutanga kushandisa foveated rendering mune yevatengi-giredhi headset neiyo yekutanga Oculus Kutsvaga kusimudzira mashandiro, uye Facebook's AI chikamu chine kakaratidzwa kuti ivo vari kushanda pane tekinoroji yakafanana neNVIDIA's DLSS 2.0 yemhuri yeOculus Quest.
Hapana mubvunzo kuti izvi zvichawedzera kusimudzira mhando yemifananidzo uye mashandiro eQuest 2 mitambo, kuenda kumberi, sezvo chipset iyo inopa simba iyo Quest 2 yakanaka kwazvo mukugadzira maAI-based kuverenga anodiwa erudzi urwu rwehunyanzvi. Iyo Oculus Kutsvaga 2 ichave iriko muna Gumiguru 13, uye iri chokwadi kuedza kwaFacebook mukugadzira yakazara-inozivikanwa yeVR koni kune ruzhinji.
Nyore, ine simba VR
Kubva ku $ 299 kuAmazon
Kubva pamadhora makumi manomwe neshanu paWalmart
Kutamba senge iwe usati wamboona kare
Facebook yakavandudza kuita kunge zvese nechizvarwa chechipiri Oculus Kutsvaga, ichiita iyi VR koni kuwana.
Tamba mitambo yePC VR paOculus Kutsvaga 2 pasina iyo $ 80 yepamutemo tambo
Oculus Kutsvaga 2 vs Oculus Kutsvaga: Ndeupi musiyano uripakati peaya maVR mahedhifoni?
Maitiro ekugonesa kuchengetedza kwegore paOculus Quest 2 (uye mashandiro avanoita)